Akanakisa IPTV maapplication aunogona kuisa pane yako GNU / Linux distro | Linux Vakapindwa muropa
IPTV Yakave imwe nzira yekuti vazhinji vakwanise kutarisa zviuru zvematanho mahara. Iyi Internet TV protocol haisi pamutemo kana zvisiri pamutemo, zvese zvinoenderana nekuti unoishandisa sei. Nayo unogona kuona zviuru zvemahara emahara anotepfenyura pachena pasirese, kana iwe unogona kuushandisa kushandisa mamwe mapirate maratidziro ayo anotorawo akavharidzirwa makiteshi ...
Kubva kuLxA isu hatisi ivo vane chekuita nekushandiswa kwe IPTV asi, kune avo vanoshandisa ino system, ndinoda kuratidza mamwe maapplication akanaka zvinoenderana neIPTV uye kuti iwe unogona kuisa pane yako yaunofarira GNU / Linux distro kuti unakirwe nezvose zvirimo (zvemitambo, zvirongwa, zvakateedzana, mabhaisikopo, mumhanzi, zvinyorwa,…) izvo iwe zvaunoda kubva kune imwechete application.
Chinyorwa cheakanakisa IPTV maapplication eLinux
Chinyorwa chine akanakisa IPTV maapplication eLinux iwe yaunogona kuwana ndeinotevera:
Guvva: zvirokwazvo, imwe yeakanakisa. Iyo yakazara multimedia nzvimbo yekutarisa IPTV uye nezvimwe zvakawanda, sezvo iine nhamba hombe yemabasa uye maadonons ekuwedzera kugona kwayo.
MaharaTUXTV- imwe yeakanakisa IPTV yeLinux. Inowanikwa mumitauro inosvika makumi maviri neshanu uye nesarudzo dzekurekodha zvemukati kuti zvionekwe zvekare. Kutanga kuishandisa, iwe unongofanirwa kurodha pasi nekumisikidza chirongwa, tsvaga iyo m21u URL yeiyo playlist yaunoda kuona, vhura iyo app, isa chinongedzo uye tinya Tsvaga ...
IPTVx: Iyi yakavhurwa sosi app yakanyatsogadzirirwa IPTV paLinux. Izvo zvakanyorwa muC, uye zvakasiyana mune dzimwe nzira kubva kune vamwe. Mushandisi anogona zvakare kuchengetedza zvemukati senge yapfuura imwe. Kana iri yekushandisa, zviri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kurodha pasi nekumisikidza, vhura iyo app, tsvaga iyo EPG chikamu uye ipapo unogona kutsvaga nzira dzaunoda.
Miro: ndeimwe IPTV player inowanikwa yeLinux. Iyo ine akawanda anonakidza mashandiro, asi pamwe inonyanya kuzivikanwa ndeyekuti iyo inokutendera iwe kubata akawanda mavhidhiyo mafomati pasina kukonzera matambudziko uye neiyo HD zvemukati. Iwe unongofanirwa kurodha pasi, riise, vhura iyo app, tsvaga iyo m3u yekubatanidza iwe yaunoda kuona, woiisa muapp kuti utange kuona iwo mageru.
VLC: Sezvaunoziva, iyo multimedia player ndiyo imwe yeakanyanya simba uye akazara, uye inowanikwa kune Linux. Uye pakati pemabasa ayo, inotsigirawo ITPV. Dhawunirodha, isa, vhura iyo app, enda kuMedia, Vhura network nzvimbo, isa iyo URL kubva pane irwo runyorwa, uye Tamba.
UbuntuTV: iyo inoshanda sisitimu ine inoshamwaridzika interface, yakapusa kune avo vanotsvaga nyaradzo. Ingo kurodha pasi, gadza, vhura, sarudza izvo zvaunoda kuona uye voila ...
tvendend: ndeimwe sarudzo yauinayo yekutenderera vhidhiyo. Iyo zvakare inotsigira kurekodha, uye iwe unogona kuzvibata kuburikidza newebhu webhu kana iwe uchinge waisa iyo kana iwe ukabva kubva pawebhusaiti yako kuenda ku http: // [yako-ip]: 9981 /, uchitsiva [yako-ip] yekero yako. Semuenzaniso, http.//192.168.1.2:9981.
IPTVnator: Kunyangwe vazhinji vasiri vateveri veElectron nekuda kwezvikonzero zviri pachena, heino imwe app inoenderana nayo uye inoenderana neIPTV zvinyorwa (m3u, m3u8). Iyo ine yakapusa interface iyo iwe uchazoziva maitiro ekugadzirisa kubva panguva yekutanga nguva pasina matambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Iwo akanakisa IPTV maapplication aunogona kuisa pane yako GNU / Linux distro
Pindura kuna Peter
Mhumhi diki akadaro
Ubuntutv haisi chirongwa chekutarisa iptv, asi pachinzvimbo chekushandisa materevhizheni.
Kune iwo rondedzero iwe yaunopa ini ndinowedzera.
Uye vamwe vakandisiya mumugodhi weinki.
Ndatenda zvikuru nekutumira.
Pindura kuna Lobito
Right, mhosva yangu
Mhoroi nekutenda nerondedzero. Kune vamwe vakaita saFreetuxtv anga asingazive kuti iwe unogona kuwedzera iptv zvinyorwa kunze kweizvo zvinouya kuzoiswa. Akatarisa kana aimuziva. Chandisinganzwisise IPTVx iri muchitoro kana waisa kuti "yakanyatsogadzirirwa IPTV muLinux" uye zvandisingatombo nzwisisa chirongwa cheUbuntuTV icho chaisashanda uye chakasiiwa kwenguva refu. nguva yakawanda makore (chinongedzo chaunoisa chinotitora isu chaicho kune iro peji rinoti 410: Peji rakadzimwa Ubuntu TV haichisiri kutsigirwa
. Kwazisai uye ndinokutendai.
Ubuntu tv isisitimu yekushandisa ye smart tv uye haisisipo, yamiswa, asi haisi application.
Iptvx inongowanikwa chete kuMacOS, haina Linux vhezheni.
Iyi ndiyo Spectacle 20.12's annotation edhita, (ndoda) yakakwana kune vashandisi ve KDE
Iwo mamaneja emukati. Yakavhurika yakavhurwa sosi hutungamiriri.